MDC-T Yoronga Kusatambira Bumbiro Idzva
Gumiguru 06, 2010
Bato reMDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai rinoti harisi kufara nemafambiro ari kuita chirongwa chekunyorwa kwebumbiro idzva, richiti zviri nani hazvo kuti chirongwa ichi chiparare, pane kuti pfungwa dzebato rimwe chete dzinge dziri mubumbiro idzva.
MDC inoti vanhu vari kumanikidzwa nenhengo dzeZanu-PF kuti vataure zvinofungwa nebato iri, kana kusabvumidzwa zvachose kupa pfungwa dzavo. MDC inoti ichakurudzira vanhu kuti vasatambire zvinobuda muchirongwa ichi pareferendamu ichaitwa.
Mashoko e MDC anoteverawo mashoko emutungamiri webato iri, VaMorgan Tsvangirai, avo vakatiwo chirongwa chekunyorwa kwebumbiro idzva, hachisi kuzoburitsa chokwadi chiri kubva muvanhu. VaTsvangirai vakati zviri nani kuti vakuru vezvematongerwo enyika vagare pasi kuitira kuti pave nebumbiro rinotambirwa nemapato ose.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kudivi reMDC inotungamirwa naVa Arthur Mutambara.
Sangano reNCA, iro rakagara richishora chirongwa ichi, rinotiwo MDC inofanirwa kutora matanho panyaya iyi, kwete kugara yakaita mavovo sechindumurwa.
Va Madock Chivasa ndivo mutauriri weNCA, sangano rakatungamira hurongwa hwekukurudzira veruzhinji kuti vasatambire draft constitution mureferendamu yakaitwa muna Kurume 2000. VaChivasa vanoti MDC inofanirwa kubuda pachena panyaya iyi kwete kungoramba ichichema ichiti Zanu PF iri kuvhiringidza chirongwa chekunyorwa kwebumbiro idzva.
Nhengo yeCrisis in Zimbabwe Coalition, VaSydney Chisi, vanotiwo zvakakosha kuti nyaya yebumbiro idzva igadziriswe.
Hurokuro naVaSidney Chisi